कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म नेपालमा ३८ जनाको मृत्यु
प्रदेश २ को नारायणी अस्प्तालमा ५ हजार ५ सय तिरेर अब जोकोहीले पनी पिसिआर टेष्ट गराउन पाउने
तराईका नदीहरुमा पानीको सतह बढ्यो, जिल्ला दैवि प्रकोप तमतयार
नो पार्किङ्गले व्यापारमा असर, व्यापारीहरुलाई बन्धक नबनाउन आग्रह
हावाबाट पनि कोरोनाभाइरस सर्ने प्रमाण डब्लुएचओद्वारा स्वीकार
ओली–दाहाल भेटवार्ता दिउँसो ४ बजे, सहमतिको ठोस प्रस्ताव खोजिंदै
सर्वाधिक मूल्यमा सन्दीप लामिछाने अनुबन्धित, एक करोड बढीमा सीपीएल खेल्ने
बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै उपत्यकामा बढे कोरोना संक्रमित, देशभर थपिए २०४ जना
कोभिड १९ को महामारीबाट विश्व देशलकडाउनमा एक महिना बढी भएको छ । यस्तो अवस्थामा मानव जीवन बचाउनु पहिलो प्राथमिकता हो भने धरापमा पर्न लागेको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने यो विषयमा समेत चिन्तन गर्नु पर्ने बेला भइसकेको छ । अहिलेको यो महामारीबाट कसरी पार पाउने भन्ने विषयमा कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा सबै नागरिक सचेत हुनु पर्दछ । दैनिक रूपमा कमाएर खानु पर्नेलाई धेरैलाई प्रभाव पार्ने छ । विकसित राष्ट्र पनि यसबाट अछुतो रहन सकेनन् । किनकि त्यहाँ पनि अभाव देखिन थालिसकेको छ । यस हिसाबले नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहने भएन । अछुतो छैन पनि ।
कोरोनाको महामारीका कारण विश्वको कुनै पनि ठाउँ, वर्ग,अर्थतन्त्र अछुतो रहेन । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको संरचना भोलिका दिनमा परिवर्तन गरिदिने, विश्वको ध्रुवीकरण फरक पारिदिने सम्भावना छ । साथै यसले विश्वका मानिसहरूको बानी ब्यहोरा फरक पार्छ कि भन्ने पनि देखिएको छ । मान्छेको परनिर्भर र अन्तर निर्भर हुने कुरालाई पनि पुनर्विचार गर्नु पर्ने स्थिति आएको छ । अहिलेको अवस्थामा हात मिलाउन समेत बन्देज गरिएको छ । यसले कुन देशको परम्परा संस्कार उपयुक्त रहेछ भनेर पुनर्विचार गर्नु पर्ने देखिएको छ । हिजोका हाम्रा समृद्धिका सपनाहरू पुरा गर्ने कुरा पनि यसले गर्दा पछि धकेलिन्छ । पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा पनि पछि जान्छ । यो समस्याले मान्छेको रोजगारी,पुनरनिर्माण,उद्योग,शिक्षण संस्था सबैलाई प्रभाव पारेको छ । भोलि दिनमा गरिबको संख्या बढेर थप जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि जान्छ कि भन्ने सम्मको स्थिति देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले नीतिगत व्यवस्था तथा आर्थिक प्याकेज कसरी बनाउने भन्ने बारेमा
रणनीतिक कार्य योजना यथाशिग्र बनाउनु पर्दछ ।
रोगीको स्वास्थ्य जाँच गर्न पूर्वाधार पनि चाहियो । फेरि परीक्षण गर्दै गर्दा त्यसमा संलग्न चिकित्सक,नर्स र प्राबिधिकहरूको सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । दोस्रो कुरा जीवनलाई जोगाउने कुरामा अन्य खालको रोग लाग्न सक्छ । माहामारीमा खाने पिउने कुराको राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्तैन । त्यसले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक थप समस्यामा पर्छन् । त्यस कारण उनीहरूलाई औषधि,स्वास्थ्य सेवादेखि लिएर अन्य खाद्य पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनु पर्छ ।
विशेष गरी त्यो वर्ग, समुदायलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्छ । यसै गरी जो दैनिक रोजीरोटीकालागि सङ्गर्षरत हुन्छन् । जो असक्त छन, रोगी छन् उनीहरूको जीवन जोगाउने कुरामा बढी ध्यान दिनु पर्छ ।
सरकारले आपूर्ति गर्छाै भनिरहेको छ । उत्पादन भएन भने आपूर्ति कहाँबाट हुन्छ ? यो समस्या लामो समय जाने भयो भने आपूर्ति कहाँबाट हुन्छ ? त्यसको पूर्व तयारीको लागि अति आवश्यक बस्तुहरूको उत्पादनलाई कहिन कहीँ, कुनै न कुनै ढङ्गले, चाहे त्यो दैनिक खाने तरकारी होस् या खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउँनुपर्छ ।
मानिस,मेसिन र पैसा सबै स्थिर भएको बेलामा अर्थतन्त्र पनि स्थिर भएको हुन्छ । भोलि अर्थतन्त्र ओरालो थला पर्दाको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर अर्थतन्त्रलाई उकास्ने रणनीति सरकारले तयार गर्नुपर्छ । रणनीति बनाउँदा सरकारले सबै सित मिलेर,सहभागिता मूलक ढङ्गले,जनताको समेत साथ लिएर, अगााडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निर्माण क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने मुल कुरा हो । दोस्रोमा उद्योग क्षेत्रमा कहाँ कसरी नोक्सान प¥यो, भोलि ऋणीहरूले बैङ्कहरूको व्याज तिर्न नसक्लान ,बैङ्किङ क्षेत्रमा पनि समस्या छ । उनीहरूको सावा व्याज नउठ्ला, बैङ्किङ क्षेत्रलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ला,उद्योग ल्याउने त्यसलाई के ग¥यो भने उकासिन्छ ? नीतिगत व्यवस्था तथा आर्थिक प्याकेज कसरी बनाउने भन्ने बारेमा बिज्ञहरुको टोली बनाई रणनीतिक कार्य योजना यथाशिग्र बनाउनु पर्दछ ।
आन्तरिक पर्यटन र बाह्य पर्यटनलाई कुन अवस्थामा कहिले सम्म अघि बढाउने भन्ने विषयमा साबिकको भन्दा फरक ढङ्गले सोच्नु पर्छ । विश्वमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भन्छौ । यो पनि जलवायु परिवर्तन प्रभावको एउटा असर हो । प्रकृतिको प्रतिरोध गर्ने क्षमता हाम्रा क्रियाकलापले ह्रास गराइदिएका छौ । यी कुरालाई बढी ख्याल गर्नु प¥यो र विश्वले पनि त्यही ढङ्गले सोच्नु प¥यो । नेपालले पनि आफ्नो तहमा, आफ्नो अर्थ प्रकृति, आर्थिक, सामाजिक र भूगोल अनुसारको नीति लिनु पर्छ ।
अहिले सबैभन्दा बढी अगुवाइ गर्ने सरकारले नै हो । तर सरकारको साथै प्रतिपक्षको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनु पर्छ । सबै स्टेक होल्डरले यो माहामारीबाट बच्न बराबरी भूमिका खेल्नु पर्छ । अझै बढी जनताको भूमिका चाहिन्छ । तर अगुवाइ सरकारकै हुनुपर्छ । नेपालका सरकारहरू अहिले मात्रै होइन । कहिल्यै चित्तबुझ्दा कार्यहरु गरेको हेक्का छैन । चित्त बुझ्दो किसिमले सरकारले काम गरेको भए यो अवस्थानै आउने थिएन । सुरुवातकै समयमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भन्छ भनी निगरानी बढाउँदै आफ्नो सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्दथ्यो । त्यसमा सरकारकाहरुका ध्यान पुगेको छैन ।
अर्थतन्त्रमा पर्न थालेको प्रभाव, पर्यटनमा परेको प्रभाव अध्ययन गरौँ । हाम्रा योजना कस्ता हुन्छन् र कसरी जोगिने भनेर हामी बाहिरका मान्छेले भनिरहेकै थियौ । सरकार तात्न त तात्यो तर अलि ढिलो तात्यो । विश्वमै अलि बढी नै प्रभाव परेपछि र दोस्रो सङ्क्रमित भेटिएपछि अत्तालिएर सरकार तात्यो । यो कुरालाई समयमै लिनु पर्दथ्यो तर अलि ढिलो ग¥यो । तर जे भए पनि अहिले सरकाले चालेका कदमलाई सबैले साथ दिनु पर्छ । सरल अवस्थामा लिएको वित्तीय नीतिले अहिले काम गर्छ त ? यतिखेरको वित्तीय नीति कस्तो हुनु पर्छ ? पहिले सहज अवस्थामा लिइएका सबै नीति काम नलाग्ने त हुँदैनन् । तर धेरै कुरा अहिले फरक ढङ्गले, रणनीतिक हिसाबले तय गर्नु पर्छ । हिजो कहाँ थियौ ? अहिलेको अवस्थाले हामीलाई कहाँ प¥ुर्याउँदै छ,भनेर नीति अघि सार्नु पर्छ ।
यति बेलाको अवस्थामा तल्लो वर्गका मानिसहरूको दैनिकीमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्छ । त्यसलाई रोक्न प्याकेज दिने । यस्तो बेला गरिबीका रेखामुनि भएका निम्न वर्ग ठूलो मारमा पर्छन् । बालबालिका कुपोषणमा पर्न सक्छन् । शिक्षामा पर्याप्त लगानी नहुन सक्छ । विदेशमा गएकाले रोजगारी गुमाएका हुन सक्छन् । यो अवस्थालाई हेरेर सरकाले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
#कोरोनामा अर्थतन्त्र #कोरोना कहर
बिहिवार, बैशाख २५, २०७७, ०३:०५:००
कोरोना महामारीले वीरगंज महानगरकाे बजेट कटौती, यसवर्ष पा‌ैैैैने चार अर्वकाे बजेट
सञ्चालन खर्च कम गर्न शाखा घटाउन पाउनुपर्ने माग बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या बढी भएको स्थानमा रहेका शाखा कार्यालयहरु बन्द गर्नुपर्ने प्रक्रिया सहज गर्न बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएको छ ।
असार ७, २०७७ कविता खड्का
सुनको मूल्य ९० हजार नजिक सुनको भन्सारदर बढाएसँगै सुनको मूल्य बढ्न गएको हो ।
जेठ ३१, २०७७ कविता खड्का
कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म नेपालमा ३८ जनाको मृत्यु असार २७, २०७७